/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၃)
ေဗဒင်ဆရာပုဏ္ဏားေတွကို ယံုြကည်မှုဟာလည်း အခုေခတ်မှာ ေတာ်ေတာ်ေလးလွန်ကဲလာတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ ေဗဒင်ဆရာေြပာလှျင် ေြပာတိုင်းအကုန်လုပ်ြကေတာ့တာပါပဲ။ကဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မယ့်သူတစ်ဦးေပါ့ခင်ဗျာ။စီးပွားေရးေကာင်းေအာင််၊ လူေသာက်များေအာင် ေဗဒင်ဆရာ ကိုသွား ေမးပါတယ်။ေဗဒင်ဆရာ ကေတာ့ဘယ်နားမှာဘယ်လိုလုပ်၊ဒါေလးကိုအေဆာင်ယူြပီးလုပ်ဆိုရင်ေတာ့လုပ်ြပီေပါ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည် ဆိုင် လံုး၀ေရာင်းမေကာင်းပါ။ ဘာလို့ေရာင်းမေကာင်းတာပါလဲ။ သူဖွင့်တဲ့ေနရာက ေတာ်ေတာ်ေလးေချာင်ကျ တယ်၊ သူ့တို့လမ်းထိပ်ဖက်မှာလည်း အြခားေသာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များရိှေနတယ်ေလ။ ဘယ်လိုပါလဲ။ ေဗဒင်ဆရာကို အားကိုးကျတာကိုး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းစစ်ြကည့်ရင် ေဗဒင်ေတာင်သွားေမးစရာမလိုပါဘူး။
ကျွန်ေတာ်တုိ့ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုေတာ်နဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ေဗဒင်ဆရာေတွရဲ့အလိုကို ြကည့်ြကပါဦး။ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ေဗဒင်ဆရာေတွက ေကာင်းကင်နက္ခတ်ြဂိုဟ်ြကီးေတွရဲ့ ေြပာင်းလဲမှုဟာ လူေတွရဲ့ ကံြကမ္မာနဲ့ ဆုိင်ပါသတဲ့။ ြမတ်ဗုဒ္ဓကေတာ့ လူေတွ့ရဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမှု ေတွကသာမိမိတို့ရဲ့ကံြကမ္မာြဂိုဟ်နက္ခတ်ေတွကို ေြပာင်းေစပါတယ်တဲ့။မိတ်ေဆွများခင်ဗျာ. .ြမတ်ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏား ေတွ ရဲ့ အလို တူတယ်လို့ထင်ပါသလား။ လံုး၀လံုး၀ကွဲြပားြခားနားပါတယ်။ မိတ်ေဆွတို့ဆိုရင်ေကာ ဘယ် အလိုကို လိုက်ပါမလဲ ? ။..။
ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှုအဆင့်ကေန တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာြဖစ်ေအာင် ြကိုးစားြကစို့လားခင်ဗျာ
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, November 23, 2007
That's right! ကျွန်မလည်း ဘာသာတရားကုိပဲယံုြကည်တယ်...
November 23, 2007 at 8:06:00 AM GMT+6:30
အင်း ဟုတ်တယ် အကိုေရ။ နတ်ေတွကို အရမ်း ကိုးကွယ်ြကတာပဲ သိလား။ သဲကေတာ့ အဲဒါေတွ မြကိုက်ဘူး။ အိမ်မှာဆို အိမ်တွင်းနတ်ေတွလည်း မရှိဘူး။ ဘုရားသန့်သန့်ေလးပဲ။
November 23, 2007 at 10:53:00 AM GMT+6:30
ကျေနာ်က Blogspot မဟုတ်ေတာ့...Comment ေရးဖို့ ဂွကျေနတယ်...
ဒီလိုေရာေထွးတဲ့ ကိုးကွယ်မှုမျိုးဟာ ြမန်မာမှာတင် မကပါဘူး။ တြခားဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံေတွမှာလည်း ေတွ့ရပါတယ်။
ပထမတချက်အေနနဲ့ ေြပာလို့ရတာက ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ Flexible ြဖစ်မှုေြကာင့်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ လူေတွရဲ့ Spiritual Needs ေြကာင့်ဗျ။ စိတ်ခိုကိုးရာလိုမျိုး လူမှုအပူေတွကျေတာ့ အကုသလတရားေတွဖက်ေလေတာ့ အခါခပ်သိမ်း ဘာသာေရးလမ်းစဉ်နဲ့ မကိုက်ဘူးဗျ။ အဲဒီအခါမှာ နတ်တို့၊ ေမှာ်တို့၊ ဘိုးေတာ်တို့က ေနရာြဖည့်ြကတာပဲ။
ဒါေပမယ့် ေခတ်ကာလအလိုက် ေြပာင်းလဲသွားဖို့ ေမှျာ်လင့်လို့ ရပါတယ်။ ကျေနာ်တို့ ငယ်ငယ်ကနဲ့ အခု ယှဉ်ြကည့်ဗျ။ (၁) နတ်ကန္နားပွဲေတွ နည်းသွားတယ်၊ (၂) လူငယ်ေတွက ၃၇ မင်းနတ်၊ ရိုးရာ စတာေတွကို မျက်နှာလွဲရဲလာြကတယ်။ ကျေနာ်တို့ အေမေတွေခတ်တုန်းက ရိုးရာကိုင်မှာ သိပ်ေြကာက်တာေပ့ါ။ ဒါက ဆိုက်ကိုတစ်မျိုးကိုး။
ပုဂံေခတ်က စလာတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်မှုဟာ Phenomena တစ်ခုလို ြဖစ်ခဲ့ေပမယ့် အခု ေနာက်မျိုးဆက်ေတွရဲ့ လူမှုကဏ္ဌမှာ ေနရာသိပ်မရှိေတာ့ပါဘူးဗျာ။
ဒါေပမယ့် တစ်ခုေတာ့ ေထာက်ြပချင်တယ်။ ဒီလို လစ်ဟာသွားတဲ့ ဘာဘာေရး စာမျက်နှာမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒလမ်းေြကာင်းကို သံဃာေတွက ချမေပးနိုင်ဘူး၊ ချေပးဖို့ ဂရုမထားနိုင်ဘူး၊ သို့မဟုတ် ဘာသာေရးဟာ ဖိနိှပ်မှုေအာက်မှာ ဟန်ြပရှိေနမယ်ဆိုရင် မျိုးဆက်သစ်ေတွဟာ (၁) ဘာသာေရးနဲ့ ေ၀းသွားမယ် (ဥပမာ-ထိုင်း) (၂) အဲဒီခင်ဗျားတို့ မနှစ်မျို့တဲ့ နတ်ေတွဆီ Spiritual Rely အတွက် ြပန်လည်သွားြကလိမ့်မယ်လို့ သံုးသပ်မိပါတယ်။ ကျေနာ် ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်မဟုတ်ေပမယ့် ကျေနာ့် ပုဂ္ဂလိက အြမင်ပါဗျာ။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲြကပါ။
ကျေနာ်နဲ့ ၃၇ မင်း ေရစက်နီးဖူးြပီး ြပန်ေြပာရရင် ဟာသေြမာက်မယ့် အြဖစ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
November 23, 2007 at 12:13:00 PM GMT+6:30
ဘယ်နတ်မှ မကိုးကွယ် မယုံြကည်ပါဘူး။ အရင်က နတ်အေြကာင်း ေသချာမသိေပမယ့် "ြဖူးဆရာေတာ်ရဲ့ ေသွးနဲ့ေရးတဲ့သာသနာ"တရားေတာ်ကို နာဖူးကတည်းက အနေန္တာအနန္တငါးပါးကလွဲြပီး ဘာမှမယုံြကည်ပါဘူး။
November 25, 2007 at 7:57:00 AM GMT+6:30
လူေတွက သူတို့အဆင်ေြပတာမရှိရင်. နတ်ကိုးလိုက်. ေဗဒင်ဆရာဆီေြပးလိုက်နဲ့. ဆွမ်းဆန်စိမ်းေလာင်းဖို့အလှူခံလာရင်သာမသိဘဲရှိမယ်. နတ်ကနားပွဲေတာ့ေြပးေနြကတာပဲ..စိတ်ညစ်စရာေနာ်.
March 12, 2009 at 2:32:00 PM GMT+6:30